सुस्तायो एकता : गठित कार्यदलले समयमै बुझाउन सकेन प्रतिवेदन !
सुस्तायो एकता : गठित कार्यदलले समयमै बुझाउन सकेन प्रतिवेदन !
काठमाडौँ - नेकपा स्थायी समितिको गत पुस १३ गतेको बैठकले १० दिनको समय दिएर समायोजन टुंग्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो । जस अनुसार कार्यदलले यही पुस २५ पुसभित्रै दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्थ्यो। तर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । कार्यदलमा अधिकांश सदस्य मन्त्री रहेका कारण बैठक नै प्रभावित बन्दै आएको छ । विशेषगरी क्रियाशीलताका आधारमा योग्यलाई जिम्मेवारी दिने कि पार्टी एकताअघिको जिम्मेवारीका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विवाद छ । जसका कारण पनि पुसभित्रै पार्टीका सबै संगठन एकीकरण गरिसक्ने स्थायी समितिको निर्णय प्रभावित हुने देखिएको छ ।